ग्रीन टी पिउनुका धेरै फाइदा, तर कति बेला हुन्छ हानिकारक ?
काठमाडौँ । कोही दुधको चिया पिउन मन पराउँछन् भने कोही स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर ग्रीन टी पिउन रुचाउँछन् । ग्रीन टी प्रशोधन नगरिएको हुनाले स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । यसले तौल घटाउन मद्दत गर्छ, शरीरमा जम्मा भएको बोसो घटाउँछ र मेटाबोलिज्म बढाउन पनि फाइदाजनक हुन्छ । तर यदि यसका फाइदाहरू छन् भने केही बेफाइदा पनि छन्, जुन तपाईंको स्वास्थ्य र चिया पिउने तरिकामा पनि भर पर्छ । यस्तो अवस्थामा सचेत हुनु पनि जरुरी छ ।
यदि तपाइँ किशोरावस्थामा हुनुहुन्छ र छाला सम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ वा व्यस्त जीवन र प्रदूषणका कारण छाला सम्बन्धी समस्याले सताइरहनुभएको छ भने ग्रीन टी पिउनुहोस् । यसले शरीरमा कोलाजेन संश्लेषणको मात्रा बढ्छ । यसले छालालाई प्राकृतिक चमक र चमक दिने, कालो दाग र छालाको टोनसँग सम्बन्धित समस्याहरू कम गर्न सक्छ । साथै छाला पनि स्वस्थ देखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सुधार
आज, धेरैजसो मानिसहरूले मानसिक तनावका कारण बारम्बार टाउको दुख्ने, माइग्रेन, थकान र निद्राको विकारको गुनासो गर्छन् । यो तनाव कम गर्न हरियो चिया उपयोगी छ । केमोमाइल, भ्यालेरियन रूट र ल्याभेन्डर जस्ता सुपरफुडहरू मिसाएर एक कप ग्रीन टी पिउनुहोस् । यसले मानसिक चिन्ता र तनाव कम गर्न मद्दत गर्नेछ । रातमा आरामदायी र गहिरो निद्रा लाग्नेछ । तपाईं हरियो चियामा क्यामोमाइल, भ्यालेरियन रूट र ल्याभेन्डर थप्न सक्नुहुन्छ वा हरियो चियामा मिसाइएको चिया किन्न सक्नुहुन्छ ।
बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबै उमेरका मानिसहरूको लागि, तिनीहरूको भित्री शक्ति राम्रो स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो उपाय हो, जुन प्रत्यक्ष रूपमा बलियो प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित छ । हरियो चियामा अमला, तुलसी, बेसार, गिलोय र स्पिरुलिना जस्ता आयुर्वेदिक जडीबुटी मिसाएर खाँदा धेरै फाइदा हुन्छ ।
दूध र चिनी मिसाएमा ?
तपाईं दूध र चिनी मिसाएर ग्रीन टी पिउन सक्नुहुन्छ । तर दूधमा भएका प्रोटिनहरू हरियो चियाको फाइदाजनक प्लान्ट कम्पाउन्डहरू (फ्लाभोनोइड्स) सँग बाँध्छन्, जसले शरीरलाई फ्लेभोनोइडहरू अवशोषित गर्न गाह्रो बनाउँछ । यसले शरीरको तौल घटाउने क्षमतामा बाधा पुर्‍याउँछ । यद्यपि, ल्याक्टोज असहिष्णु नभएको खण्डमा हरियो चियामा दूध र चिनी मिसाउन सकिन्छ ।
ग्रीन टी कहिले पिउनु हुँदैन ?
गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूले ग्रीन टी पिउनु हुँदैन । २ वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई पूर्ण रूपमा नदिनुहोस् । मृगौला रोग, मुटु रोग र पेटको अल्सरको समस्या भएकाले पनि टाढा रहनुपर्छ । मनोवैज्ञानिक समस्या भएका व्यक्तिहरूले पनि ग्रीन टी पिउनु हुँदैन। ग्लोकोमा, कलेजोको रोग, ओस्टियोपोरोसिस, एनीमिया र मधुमेहबाट पीडित व्यक्तिहरूले यसबाट बच्नुपर्छ । यसलाई बिहान खाली पेट पिउनु हुँदैन । दिनमा एक पटक मात्र पिउनुहोस् ।
एलर्जी पहिचान गर्नुहोस्
यदि तपाईलाई हरियो चियाबाट एलर्जी छ भने, तपाईले चिया पिउने बित्तिकै आफ्नो मुखमा झनझन वा चिलाउने अनुभूति अनुभव गर्नुहुनेछ । ओठ, घाँटी, जिब्रो वा अनुहार सुन्निन सक्छ ।